Tadao Ando, ​​ilay mpanao mari-pahaizana nianatra momba ny habakabaka sy ny jiro ary ny simenitra | Famoronana an-tserasera
Hay mpanao mari-trano mahay mamela marika hafa amin'ny mpandeha izay mandalo ny habaka sy ny maritrano. Tadao Ando dia afaka mitarika an'io ary betsaka kokoa amin'ny fomba fahalalàny ny zoro, ny tsipika ary ny fihodinan'ny asa tanana tsirairay avy aminy.
Ando dia afaka namboly asa matihanina mifototra amin'ny harena an-tsary sy ny estetika maoderina tenany. Afaka nampifangaro ny lafiny maoderina amin'ny fitsipiky ny famolavolana Japoney, io mpanao mari-trano io dia afaka niampita ny sisintaniny.
Ny zavatra mahatsikaiky momba an'i Ando dia ny nanombohany ny lalam-piainany tamina faritra hafa, ady totohondry matihanina ary mpamily kamio. Nanjary mpandrafitra izy tamin'ny farany nahavita ny famolavolana.
Manomboka amin'ny fampianarana samirery ny lasa mpianatra fanabeazana lavitra, vonona ny ho anarana amin'ny maha mpanao maritrano azy. Io dia namela azy hanao ny lalany manokana sy hamaritra ny mombamomba azy hisamborana ny heviny momba ny firafitry ny toerana sy ny habakabaka.
Anisan'ireo fitaovana nampiavaka an'i Tadao Ando hita ny fampiasana simenitra. Ny famaranana azony tamin'ny simenitra, miaraka amin'ny rindrina minimalista, dia nanome azy ny fahaizana manome fomba amam-pihetseham-po amin'ireo habaka noforoniny.
Su sary miangona 'Church of Light'Niorina tamin'ny 1989 ary miorina eo amin'ny sisin-tanin'i Osaka, io no ohatra voalohany amin'ny herin'ny fahatsorana. Asa vita amin'ny simenitra nohosoran'ny hazavana avy amina endrika hazo fijaliana.
La geometry koa dia ampahany lehibe amin'ny sangan'asan'ny maritrano tsirairay amin'ny fahalalana ny fomba fampidirana singa voajanahary amin'ny habaka iraisana. Tahaka ny nahitany nampifangaro ny natiora ho ampahany manan-danja amin'ny sasany amin'ireo sanganasany amin'ny maritrano.
Mpanamboatra ny simenitra, geometry, hazavana ary habaka, tsy manadino ny natiora. Avelanay ianao mpaka sary maka sary ary koa ny firafitr'i Viena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny maritrano manokana an'ny mpanao maritrano Japoney malaza Tadao Ando